‘बन्द सधैको लागि अन्त्य गर्न संभब छ ‘ – Peacepokhara.com
संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिएसँगै देशमा बन्द, हड्तालको श्रृंखला शुरु भएको छ । एकातर्फ बन्द आयोजना भएका छन् भने अर्कोतर्फ बन्दलाई सधैंका लागि अन्त्य गरिनुपर्ने आवाज चर्काेगरी उठेको छ । विशेषगरी बन्दका विरुद्धमा निजी क्षेत्रले चर्को आवाज उठाएको छ । बन्दलाई अन्त्य गर्न आह्वान गर्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा आइतबार पोखरामा शान्ति ¥यालीसमेत निकालिएको थियो । बन्दका कारणले निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या तथा शान्ति ¥यालीका बारेमा संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापासँग पत्रकार सुरेन्द्र पौडेलले कुराकानी गरेका छन् ।
बन्दको विरुद्धमा व्यवसायी किन ?
निजी क्षेत्र बन्दका बिरुद्धमा सधैं उभिरहन्छ । बन्दले निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । राजनीतिक पार्टी तथा विभिन्न संगठनले आह्वान गरेको बन्द जनताको लागि भनिएपनि बन्दले उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्बसाधरण जनता प्रताडित हुनुपरेको छ । एक दिनको बन्दले राज्यले एकअर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति व्यहोर्नुपर्छ । विशेषगरी पर्यटकीय नगरी पोखरामा बन्दले निकै असर पु¥याएको छ । बन्दको हल्लाले पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ भने होटल बुकिङसमेत रद्ध भएका छन् । पोखरा आएका पर्यटक बसाइँ अबधी छोट्याएर फर्किएको पनि पाइएको छ । हामी व्यवसायी एक दिनको बन्दको विरुद्धमा होइन कि बन्द आह्वान गर्ने नियतबिरुद्ध छौं ।
बेला बेला निजी क्षेत्रले नै बन्द आह्वान गरेको पाईन्छ नि ?
बन्द कसैले पनि आह्वान गर्नुहुँदैन । बन्दका कारणले एकातर्फ लगानीको वातावरण खल्बलिन्छ भने अर्कोतर्फ उद्योग, व्यवसाय नै धरासायी हुने डर छ । बन्द जसले आह्वान गरेपनि हामी त्यसको बिरोधी हौं । जुनसुकै वहानामा पनि बन्द गर्नुहुँदैन । बन्दले कुनैपनि समस्या समाधान नहुने हुँदा आगामी दिनमा बन्दको विकल्प खोजिनुपर्छ । इतिहासमा जसजसले बन्द आह्वान गरेपनि अब बन्द नगर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । नेपालमा बन्दका विरुद्धमा निजी क्षेत्रमात्र होइन अब आम सर्वसाधरण जनता जागरुक भएका छन् । बन्दले राजनीतिक दललाई पनि नकारात्मक असर पुग्ने भएकाले यस विषयमा सोच्न जरुरी छ । राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिबद्धतामा बन्द नगर्ने उल्लेख गरेकाले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्छ ।
नेपालमा बन्द सधैंका लागि अन्त्य गर्न सम्भव छ ?
सम्भव छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले बिगतमा नै बन्द नगर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका थिए । तर, अहिले पुन बन्द आह्वान भएको छ । हामी बन्दले गर्दा दुःखी छौं । बिगत एक वर्षभन्दा बढी देशमा बन्द तथा हड्ताल आयोजना नहुँदा निजी क्षेत्र तथा आम जनताले राहतको महसुस गरेका थिए । अहिले फेरी बन्द आह्वान हुँदा निजी क्षेत्रसँगै आम जनता दुःखी भएको महसुस गर्न सकिन्छ । प्रतिबद्धता अनुसार बन्दको आयोजना नगरी सबैले आफ्ना माग पुरा गराउनका लागि दबाब दिन परेमा अन्य विकल्पहरु खोजिएमा बन्द सधैंका लागि अन्त्य गर्न सम्भव छ ।
peacepokhara 06 Oct 2017